Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseAlgeria zokuPhula » IAlgeria yahlukanisa ubudlelwane bezopolitiko noMorocco
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zaseAlgeria zokuPhula • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba eziNqabileyo eMorocco • iindaba • abantu • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ukupheliswa kobudlelwane bezopolitiko phakathi kweAlgeria kunye noBukumkani baseMorocco buqala ngoLwesibini kodwa abameli kwilizwe ngalinye baya kuhlala bevulekile.
I-Algeria inqumle ubudlelwane bayo kunye noBukumkani baseMorocco.
Ukuqhekeka koonozakuzaku phakathi kweAlgeria neMorocco kusebenza kwangoko.
I-Algeria neMorocco ziye zonakalisa ubudlelwane amashumi eminyaka.
Umphathiswa Wezangaphandle wase-Algeria u-Ramdane Lamamra ubhengeze namhlanje ukuba ilizwe liyabunciphisa ubudlelwane bezopolitiko no-Kingdom of Morocco.
"IAlgeria ithathe isigqibo sokunqumamisa ubudlelwane bobuzwilana kunye nobukumkani baseMorocco ukusukela namhlanje," utshilo uLamamra kwinkomfa yeendaba ngoLwesibini, esongeza ukuba ukuqhawuka kozakuzo kubangelwe 'zizenzo ezinobutshaba' zelizwe.
"Ubukumkani baseMorocco abuzange bume izenzo zobutshaba ngokuchasene neAlgeria," utshilo umphathiswa.
Umphathiswa ukwacaphule nenkxaso yaseMorocco kwimeko yokujonga u-Israyeli kwi-African Union njengenye yezinto ezixhasa isigqibo.
Aljeriya kwaye Morokho ndinobudlelwane obuxineneyo amashumi eminyaka, ikakhulu kumba we-Western Sahara.
Ukupheliswa kobudlelwane bezopolitiko kusebenza ukuqala ngoLwesibini kodwa abameli kwilizwe ngalinye baya kuhlala bevulekile, utshilo uLamamra.
Icandelo loMphathiswa Wezangaphandle eMorocco khange lithethe kwangoko malunga nophuhliso.
UKumkani u-Mohammed VI waseMorocco ucele ukuba kuphuculwe ubudlelwane kunye ne-Algeria.
I-Algeria kwiveki ephelileyo ithe imililo yasendle ebulalayo ibingumsebenzi wamaqela athe wababiza ngokuba "ngabanqolobi", elinye lawo lathi lixhaswa yiMorocco.
Imililo yehlathi eAlgeria, eyaqhambuka nge-9 ka-Agasti phakathi kobushushu obutshisayo, itshise amashumi amawaka eehektare zehlathi kwaye yabulala abantu abangama-90 ubuncinci, kubandakanya namajoni angaphezu kwama-30.
Abasemagunyeni baseAlgeria bakhombe ngomnwe umlilo kwiintshukumo zenkululeko zommandla waseBerber ikakhulu waseKabylie, onabela kunxweme lweMeditera kwimpuma yenkunzi, iAlgiers.
Abasemagunyeni bakwatyhola iMovement for Self-maamuzi kaKabylie (MAK) ngokubandakanyeka ekubulaweni kwendoda etyholwa ngobuxoki ngokutshisa, isiganeko esivelise ingqumbo.